Lasopy siramamy miaraka amin'ny fofona fofona fofona miaraka amin'ny dingana fotsy
Voangom-bokatra avy amin'ny holatra vaovao sy maina nohatsaraina, ary ny tsirony dia mavesa-danja kokoa. Ny fako sy ny tsiro malefaka dia omena azy amin'ny alàlan'ny fofomamy vita. Hilaza aminao ny fomba handrahoana aho mofomamy mofomamy miaraka amin'ny fofom-bary.
Ity siramamy ity dia tsaratsara kokoa amin'ny sakafom-bary na mofo fisaka. Ny lasopy dia hazavana, miala amin'ny vatana. Raha azo atao, ny ranom-boasary dia mety hosoloina siramamy na siramamy mafy. Ny holatra dia azo ampiasaina ho an'ny hafa, ohatra, holatra fotsy na oisea, ary hanolo holatra volon'ondry miaraka amin'ny ala.
Mena Mena - 0,5 Kilograma
Mofo mena - Glass 0,5
Divay fotsy - 1 Glass
Chicken Broth - 4 Glass
Bow - 1 nopetaka
Butter - 6 Art. lovia kely
Mofo - 1 / 4 Glass
Olivanina - Art. 1. a spoon
Sakafo sy dipoavatra - manandrana
Cream - 1,5 Glass
Ahoana ny handrahoan'ny "siramamy mougignon miaraka amin'ny fofom-bary"
Alohan'ny hanomanana ireo holatra maina: atsangano ao anaty vilia izy ireo ary alefaso amin'ny divay fotsy, miala amin'ny 30 minitra.
Mandroandro sy manadio ireo holatra vaovao, tapatapaka kely. Apetrany avy eo ny divay (aza milatsaka) ary atsipazo ireo holatra maina toy izany.
Ny tongolobe dia mihintsana ary manapaka kely amin'ny kibay kely. Ao anatin'ilay vilany dia ampio menaka oliva sy dibera (latabatra 3), apetaho ny tongolo sy ny dipoavatra, mangatsiaka mandritra ny roa minitra ary ampio ny holatra, kobao 10-15 minitra.
Mofomamy ao anaty divay, izay voankazo masira, manampy sira sy dipoavatra, ary minoa minitra vitsivitsy ary alefao ny ronono akoho, manokàna minitra 20.
Manaova ranon-tsavoka kely ao anaty fitaratra, ary atsipazo amin'ny tavin-koditra amin'ny rambony ny ambiny.
Ao amin'ny fonosy iray, atsangano ny dibera sisa, atsofoka ary ampio ny lafarina, mifangaro ary manondraka ny crème, ento ny volony.
Apetraho ao anaty kitapo ny ao anatiny ao anaty lasopy, avereno amin'ny afo ary manompom-bary mandritra ny minitra 10, ary ampio ny rano sisa tavela, saka voatono ary roapolo minitra vitsivitsy.
Misy kitapo mofomamy mofomamy miaraka amin'ny voninkazo efa vonona, afaka mankafy izany ianao. Apetraho izany amin'ny takelaka holatra sy holatra soja.
← Soup miaraka amin'ny duck
Mamy lasopy fararano →